Uthando nothando yizici zomphefumulo wethu. Futhi noma yiliphi izwe lingabizwa, uma lifiswa. Uma sicabanga ngothando lobulili obuhlukile, uthando lomuntu kumuntu wesifazane - ingabe lwenziwa ngendlela efanele ukuze athande nawe? Yini okudingeka utshele umfana ukuthi athande nawe? Ungabangela kanjani ukuba umfana abe nomuzwa wothando?
Kukhona ongoti ku-hypnosis ne-trance okwazi ukwenza umfana athande nawe. Ngesimo somzimba, babuyisela isimo sothando bese behambisa lezi zinkumbulo zibe yiqiniso. Kodwa thina singabantu abavamile. Singakwazi yini ukufunda ukuzithanda thina bantu? Ngemuva kwakho konke, kumelwe ukuthi uhlangane nabantu abanjalo abangazibandakanya, ngisho nangezinye izikhathi bengakwazi, bangela ukuzwa uthando nabanye abantu.
Uma ulandela indlela yethu, ungabangela uthando kumuntu lapho ehlangana nawe hhayi nje ngokwemvelo ukuthi umfana akakwazi ngisho nokuqonda ukuthi uzoba kanjani kumanethiwekhi wakho.
Indlela yokwenza umfana athande ngothando nawe?
Okokuqala, kufanele uzijwayele ngezimiso eziyisisekelo zothando nothando, ngoba zisekelwe kuzo zonke ezinye imithetho.
Isimiso sokuqala: Umuntu akathandani nomunye umuntu njengalokhu, kodwa ngomfanekiso awenzayo ekuqaliseni i-interlocutor.
Ukuze wenze lokhu, udinga nje ukubonakala uphelele, futhi hhayi ukuthi uphelele ngempela. Futhi lesi sithombe sidalwe ukuziphatha kwethu.
Isimiso sesibili: Indoda ithandana ngemfihlakalo, kulowo okhona imfihlakalo.
Uma ufuna ukuphumelela ekubeni namadoda athandana nawe, kumele kube khona imfihlo kuwe, imfihlo, into engaxazululwanga. Izimfihlo ezengeziwe, kungcono. Phela, intombazane engavamile iyakhaka kakhulu kunomuntu olula kakhulu futhi ongakwazi ukubonwa njalo.
Umgomo we-3-rd: Abafana bathanda ukungena. Iyakwazi ukuthenga wonke umuntu, akekho onentshisekelo futhi akanalo nhlobo inani.
Isimiso sesine-4: Uma umuntu ethandana, ufuna ukwenza okuhle kumuntu othandekayo, ngokungenabugovu nangaphandle kokufuna lutho.
Isimiso sesihlanu: Ukwenza umfana athande nawe, kudingeka uqiniseke ukuthi usho okuncane kuye kunalokho akwenza kuwe. Khona-ke uzokwenza okuningi.
Kunezizathu eziningana zokuthi kungani umfana ethanda. Okuvame kakhulu yizizathu ezilandelayo:
- Isikhathi sokuthandana. Abanye abantu bafuna ukuthanda, bafuna ukuzwa umuzwa wothando, ngoba yisikhathi.
- Isidingo sokuqonda. Wonke umuntu unesidingo sokuqondwa. Lokhu, futhi, yisona isizathu sokuthi umuntu ufuna umuntu.
- Isidingo semizwa. Abantu abaningi banesidingo sokuzwa injabulo noma ukuhlupheka. Yebo, yebo, ekuhluphekeni. Yingakho abantu abalungile bezakhela amantombazane "amahle" futhi ngokufanayo, thina, amantombazane, sizikhethela thina "ababi". Ngakho-ke, igebe ligcwele imizwa nezinzwelo ezitholwa kithi.
- Isidingo sokuvikela umuntu (kumadoda) noma isidingo sokuvikelwa (kwabesifazane). Lesi sidingo sihambisana nemvelo ngokwayo kuwo wonke umuntu. Indoda ifuna ukuvikela owesifazane, owesifazane ufuna ukuthola owesilisa oqinile, ukuze amvikele.
- Kwenzeka futhi ukuthi intombazane noma umfana ebona ukuthi into yakhe yokucabangela ifuna ukuxhumana nomunye intombazane / omunye umfana, khona-ke, ezwa ukuncintisana, ethandana ngesizathu sokungatholakali. Umhawu futhi uvame ukukhonza njengesisusa sokuthandana.
Ngakho-ke, uma ufuna ukuthandana nomfana, udinga ukwakha ekuqondeni kwakhe ukubaluleka kwakho, othandekayo wakho, futhi kumenze asabe ukulahlekelwa nguwe.
Kule ndlela kukhona indlela esiyibiza ngokuthi "Ukuziphatha komklomelo."
Kuyadingeka ukuthi umfana abe nomuzwa wokuthi intombazane inenani elanele labalingani abangase lingabakhona futhi likwazi ukukhetha. Intombazane kufanele ivumele le nsizwa ukuthi inokwenza okuthile nokuthi iyakhanga kwabanye abantu, ukuthi abantu abaningi bafuna ukukhuluma naye.
Isibonelo, ungasho ukuthi: "Umngane wami wangiyisa emhlanganweni, futhi sasiba ngengozi. Ushayela kabi kakhulu. Isikhathi esilandelayo ngeke ngihambe naye, ngizocela omunye umuntu. "
Kule nkulumo intombazane ithi kumfana ukuthi okungenani unabangane ababili bobulili obuhlukile, futhi ngisho nangaphezulu, ukulungele ukumletha.
Noma kuyadingeka ukuthi uthi: "Umngane wami waba nenhlekelele. Ngenxa yakhe, abantu ababili baxabana futhi balwa, futhi uyabakhathalela kakhulu bobabili - njengabangane abahle. Ngiphinde ngiphanga kabi ngalokhu. Kungani ningamadoda anjalo? ... "
Ngisho nangamehlo angaboni ungabona ukuthi lokhu kuyisibonelo. Uthi futhi udinga okungenani abantu ababili. Ngakho-ke, unenani lobulili obuhlukile.
Futhi, uma umfana esenze into engathandeki, ungathi: "Uma wenza lokhu, kancane kancane ubulala imizwa kimi."
Ngalesi nkulumo, ubonisa umfana ukuthi angakulahleka ngenxa yokuziphatha kwakhe okungafuneki. Ngenxa yalokho, uzoyesaba ukukulahlekelwa, futhi uzozama ukwenza izilungiso.
Uqinisekile ukuthi isoka lakho alikusebenzisi, kodwa likuthanda? Hlola ...
Kuthiwani uma umfana engathandi umama wakho?
Indlela yokuthola indoda ukuthatha isinyathelo sokuqala: Isifundo ekucasukweni kwabesifazane
Kungani abesifazane bedumazeka ngamadoda?
Indlela yokuchitha isikhathi besifazane abangasebenzi
Ithanga nemikhiqizo yalo yokwelapha, zokupheka
Feng Shui: kanjani ukuhlomisa indlu yakho?
Ukuphila komuntu siqu ka-Ivan Urgant: abafazi, izindodakazi kanye nezingane
Yini ephikisa amadoda ekubukeni kwabafazi?
Iphunga lephunga ku-multivark